प्रणयको मन कस्तो छ ? - समाचार - साप्ताहिक
प्रणयको मन कस्तो छ ?
सन् २००५ मा फ्लाईङ्ग फिदर एल्बमबाट सांगीतिक करियर शुरु गरेका गायक प्रणय राणाले आफ्नो तेस्रो गिति एल्बम मन सार्बजनिक गरेका छन् । अमेरिकाको एटलान्टामा आयोजित एक भव्य संगीतिक समारोहमा गायीका इन्दिरा जोशी, प्रणयकी धर्मपत्नी र प्रणय लगायतले संयुक्त रुपमा एल्बम बिमोचन गरे ।
एल्बममा पप लोकपप र रक शैलिका ७ वटा गीतहरु समाबेश छन् । जसमध्ये ६ वटा गीतहरु नेपालमा रेकर्डिङ गरिएको थियो । एउटा गीत भने अमेरिकामा गरिएको हो । एल्बममा हराएको गोर्खे र नयाँ नेपाल गरी २ वटा देशभक्ति भावको गीतको अलावा माया मेरी, मन, एउटा फुल, कहाँ छौँ जस्ता माया प्रेमको गीतहरु सुन्न पाइन्छ । एल्बममा रहेका गितको संगीत संयोजन बिशाल गुरुङ, डिका गुरुङ, जनक सुनुवार, पवन वाङ्गलामा, सुजल भण्डारी, शिब मुखिया र अमृतले गरेका छन् । चल्दा चल्दै, ट्राफिक जाम र विर नेपाली जस्ता गीतबाट नेपाली संगीतिक आकाशमा चहकिलो पहिचान बनाएका प्रणयले यो एल्बमका सबै गितहरुमा उत्तिकै मेहनत गरेको बताए ।
सैनिक पृष्ठभूमीको परिवारमा जन्मिएका प्रणयले करिब १० बर्ष नेपाली सेनामा बिताए । त्यो समय उनले आफ्नो संगीतिक करियरलाइ पनि एक उचाइमा पुराएका थिए । अध्ययनका शिलशिलामा अमेरिका आउनु परेकाले तेस्रो एल्बम निकाल्न करिब एक दशक लागेको उनले बताए ।
प्रकाशित :कार्तिक १०, २०७६
तपाईंले पछिल्लो समय हेरेको चलचित्र कुन हो ? कस्तो लाग्यो ?
भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन कस्तो योगदान गर्दै हुनुहुन्छ ?
कस्तो रहेछ २५ लाखको गीत ?
क्वान्टम कम्प्युटर : कस्तो छ भविष्य ?
गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सद्धारा खगेन्द्रप्रति श्रद्धाञ्जलि माघ ५, २०७६
रोल्पाको होलेरीमा राष्ट्रिय मिडिया शान्ति सम्मेलन माघ ५, २०७६
विश्वकै होचा व्यक्ति खगेन्द्र थापाको निधन माघ ३, २०७६
आस्था राउतको सुरक्षा जाँचमा संलग्न प्रहरी जवानले दिइन् उजुरी माघ ३, २०७६
भ्वाइसका विजेताको वल्र्ड टुर माघ ३, २०७६
अभिनेता पुष्प खड्काको मनकारी मन : सहारा घरमा ५० हजार सहयोग ! माघ २, २०७६
विश्व विजेता सरोज माघ २, २०७६
सेरोगेसीको कथा बोकेर माईला अधिकारी फ्लोरमा माघ २, २०७६
रुइतलाई घिमिरे स्मृति पुरस्कार माघ १, २०७६
‘गाजा बाजा २’ बन्ने पक्का पुस २९, २०७६